Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ ရပ်တန့်ရန်နှင့် တရားဥပဒေအရ အပြည့်အ၀ ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ ရပ်တန့်ရန်နှင့် တရားဥပဒေအရ အပြည့်အ၀ ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခြင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂)ရက်
ရခိုင်ပြည်နယ် နေရာတချို့တွင် လတ်တလောဖြစ်ပွါးနေသည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အခင်းဖြစ်ပွါးရာနေရာရှိ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာမှာ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုး များနှင့် ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမှာ ယခုအချိန်ထိ ရပ်တန့်ငြိမ်သက် သွားခြင်းမရှိဘဲ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကို ကြားသိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ချပေးထားကြောင်းနှင့် တည်ငြိမ်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားနေသည့် တပြိုင်နက်မှာပင် အဓိကရုဏ်းစတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် စစ်တွေ၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တို့အပြင် ရသေ့တောင်နှင့် ကျောက်တော်မြို့ တို့အထိ ကျယ်ပြန့် လာနေသည်ဖြစ်ရာ ၄င်းဒေသအတွင်းနေထိုင် ကြသော နှစ်ဖက်ပြည်သူများအတွက် အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာနေသည်။
ဤကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး အားလုံးသော လူသားတိုင်းအတွက် မလိုလားအပ်သော ဖြစ်ရပ်ဆိုးပင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အကြမ်းဖက်မှုပင်ဖြစ်စေ ထိုအကြမ်းဖက်မှု လုပ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို အများဆုံး ခံစားကြရသည်မှာ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် များဖြစ်ကြသည်။
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွါးရာ မောင်တောနှင့် စစ်တွေနယ်မြေတ၀ိုက်ရှိ ရခိုင်လူမျိုး အများစုနေ ထိုင်ရာ ရွာများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံနေရခြင်းကြောင့် ယခုအခါ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရရာ ဒုက္ခသည်များ ပိုမိုများပြားလာနေပြီး အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များ ၏ လုံခြုံရေးအတွက် မိမိတို့ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ များစွာစိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလီမူဆလင်လူမျိုးများအကြား အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ကျူးလွန်နေမည်ဆိုပါက အပြစ်မဲ့သော အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများမှာကြောက်မက်ဖွယ် ရာ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးများနှင့် ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေမည့် အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သာမက တတိုင်းပြည် လုံးအတိုင်း အတာဆောင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာမည့်အလားအလာရှိနေသည်ကို မိမိတို့ အဖွဲ့ချုပ်မှ သုံး သပ်မိပါသည်။
ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများလုံးဝရပ်တန့်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများ ဘ၀လုံခြုံမှုအပြည့် အ၀ပြန်လည်ရရှိပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရေ ရှည်ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ကြစေရေးအတွက် လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန် အောက်ပါအချက်များကို တောင်းဆိုလိုက် သည်။
၁။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့် အခင်းဖြစ်ပွါးနေသော နေရာအနှံ့တွင် လုံလောက်သော လုံခြုံရေးတပ်များချထားပေးရန်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့လက်တွေ့ကျသည့် မာရှယ်လော အမိန့်ချမှတ် ထုတ်ပြန်ပေးရန်။
၂။ ပြီးခဲ့သည့် မေလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ မသီတာထွေး အား လူမဆန်စွာ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ရာဇ၀တ်မှုအတွက် တရားခံများကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော် ထုတ်၍ ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးအရေးယူသွားရန်။
၃။ ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ခရီးသွားပြည်သူ (၁၀)ဦးအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ကျူးလွန်မှု အပြင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို ကျူးလွန်နေသူ တရားခံများအားလုံးအား အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်၍ ထိရောက်သော အပြစ်ပေးအရေး ယူမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးရန်။
၄။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြသော အပြစ်မဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏ အသက် အိုးအိမ်၊ ပစ္စည်းများကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါရန်နှင့် ၄င်းတို့ဘ၀ လုံခြုံရေး အတွက် ပြည့်ဝသော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်။
ဒေါ်တင်တင်ညို + 66 (0) 81 0322 882
ဒေါ်သင်းသင်းအောင် + 919 891 252 316
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:59
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ ရပ်တန့်ရန်နှင့် တရားဥပဒေအရ အပြည့်အ၀ ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခြင်း . All Rights Reserved